30 mitsara yevanyori vakakura pane ruvengo | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Literature, Novela
Evha reValentine. Asi kune zvakare yakasimba mweya yevavengi yeValentine yakanaka. Mweya yaida kuiona ichiiswa kune banga nekunatsiridzwa kwevaRoma panguva iyoyo. Ehe, kune moyo yakaora, kupfuura vatema, vakarova kune rwiyo rwekutsamwa, kusuwa kwemoyo, kutsiva nehasha. Muchidimbu, vakarova chete odio. Uye vakarova vakafara uye vakagutsikana.
Nekuti munhu wese anoziva izvozvo ruvengo muvengi wepedyo werudo uye zvinopesana. Ivo vanowirirana mumwe nemumwe zvakanyanya sezvavanodyidzana pane mumwe nemumwe. Uye isu tinogona kuvanzwa ivo nesimba rakafanana uye neshungu. Ivo vanofambisa nyika pamwechete uye ndosaka vazadza mapeji uye mapeji enhau chaicho uye chakagadzirwa. Saka nhasi, pamusuwo wemabiko erudo, ngatikokei shamwari yako yepamwoyo. Isu tinounganidza mamwe mitsara akafuridzira aya makuru mavara.
Chokwadi isu tese tinoziva iro bundu riri mumatumbu, huro nemoyo kana tichiverenga aya mazwi.
1. Ruvengo ndiyo tsika yekutora mukana wenguva dzose kukuvadza vamwe. Plutarch
2. Ruvengo runotaurwa pachena haruna mukana wekutsiva. Seneca
3. Ngavandivenge chero vachinditya. Lucio accio
4. Ndinoda kutengesa, asi ndinovenga mutengesi. Julius Caesar
5. Chenjera kuti parege kuva nemunhu anokuvenga nechikonzero. Marco Pontius Cato
6. Varume vazhinji vanobatana kugovana ruvengo rwakafanana kupfuura rudo rwumwe chete. Benavente Hyacinth
7. Ainyatsoziva nezveruvengo, nekuti uyo anovenga nekutsiga anoziva maitiro ekuziva iwo iwo manzwiro mune vamwe uye anoziva nzira yekukoshesa kana ruvengo rwakajeka uye rusingachinjiki. Santiago Posteguillo
8. Ndakakuda zvakanyanya kwete kukuvenga. Jean-Baptiste Racine
9. Ruvengo kutsamwa kwevasina simba. Alphonse daudet
10. Kana ruvengo rwedu rwadzika zvakanyanya, runotiisa pasi pevaya vatinovenga. François de La Rochefoucauld
11. Ruvengo chidhakwa kuseri kwethaveni, uyo anogara achimutsiridza nyota yake nechinwa. Charles Baudelaire
12. Iko kushoma moyo, hunowedzera ruvengo.Victor Hugo
13. Zvakakwana kuti mumwe munhu avenge mumwe kuti ruvengo rufambe mukati mevanhu vese. Jean Paul Sartre
14. Usakudze neruvengo rwako uyo wausingakwanise kukudza nerudo rwako. Friedrich Hebbel
15. Ruvengo hachisi chinhu kunze kwekushaya kwekufunga. Graham greene
16. Kana tichivenga mumwe munhu, tinovenga mumufananidzo wake chimwe chinhu chiri matiri. Hermann Hesse
17. Rudo neruvengo hazvisi bofu, asi zvakapofumadzwa nemoto uri mavari. Friedrich Nietzsche
18. Ruvengo kupenga kwemoyo. Ishe byron
19. Ruvengo kutsiva kwegwara rinotyisidzirwa. George Bernard Shaw
20. Kugona kuvengana nekuvengwa tisingazive chimwe chezvakanakira nyika ino. Alessandro manzini
21. Vashoma vanhu vanokwanisa kufara vasina kuvenga mumwe munhu, nyika kana chitendero. Bertrand Russell
22. Ruvengo ndiyo cheni inosemesa munhu anogona kumanikidza vamwe nayo. Ugo Foscolo
23. Ndakanga ndichida kuda nyika, asi hapana akandinzwisisa, saka ndakadzidza kuvenga. M. Lermontov
24. Catharsis. Kuchenesa kutsiva. Aristotle akanyora kuti mweya wemunhu unoshambidzwa nekutya uye tsitsi zvinomutswa nenjodzi. Iyo ipfungwa inotyisa yekuti tinozadzisa chishuwo chakadzika chemweya kuburikidza nenjodzi yekutsiva, handiti? Jo Nesbø
25. Kutambudzwa, anodaro, nhoroondo yenyika izere navo. Kuenderera mberi neruvengo rwenyika pakati penyika. James joyce
26. Kana ruzhinji rukwanisa kuda vasingazive kuti sei, vanogona zvakare kuvenga pasina hwaro hwakawanda. William Shakespeare
27. Ini ndinotenda kuti ruvengo imanzwiro anogona kungovapo mukushayikwa kwehungwaru hwese. Tennessee William
28. Chero mukomana wechikoro anogona kuda kunge anopenga. Asi kuvenga, shamwari yangu, kuvenga hunyanzvi. Ogden nash
29. Mushure merudo, chinhu chinotapira ruvengo. Henry longfellow
30. Rudo rwakasangana neruvengo rune simba kupfuura rudo. Kana kuti ruvengo. Joyce Carol Oates
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » 30 mitsara nevanyori vakakura nezve ruvengo
Ubaldo R akadaro
Izvo zvinoyemurika, sei ini ndaida kuve nekwaniso yakadaro yekugaya ruzivo rwakawanda zvekuti hupenyu hunokupa mubayiro. Makorokoto
Pindura Ubaldo R
Izita remunyori …………. Asi rinogona kupfuura semutsara wakanaka kukuvenga…. »Ruvengo mukati memunhu wese kusvika…
Ongororo pfupi yebasa "Don Juan Tenorio" naJosé Zorrilla